ဆီးကျိတ်ကြီးသူတွေအတွက် လူနေမှုပုံစံများ | Page5| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အမျိုးသားတို့ ကျန်းမာရေးအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက် ဤ (6) ချက်
၁၇.၁၂.၂၀၁၇ | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
1. အိပ်ချိန် လုံလောက်ပါစေ။ တစ်ညကို 7-9 နာရီလောက် အိပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
2. ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။ အခု ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ရုံနဲ့ ကင်ဆာရောဂါ၊ နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ခြင်းရောဂါ အပါအဝင် အခြားဆေးလိပ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းသွားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်ပါ...